Brazil: Dumarka ku dhajiya nalalka muuqaalka erotic-ka ee Rio - TELES RELAY
ACCUEIL » beauty • aan caadi ahayn • Galmada iyo xiriirada • COMPANY »Brazil: Haweenku waxay ku jiraan maqaayad ku taalla Rio
Brazil: Haweenka ku wareegsan waxay ka muuqdaan saldhig ay ku yaallaan Rio
Bandhigga Cayaaraha ee Rio de Janeiro, oo ah nooca ugu weyn ee erotic ee Latin America, ayaa abaabulay tartan qurux badan sida "nousa plus-size" ("Goddess of size"), si loo muujiyo buurnaanta waxay ku qoslaan dareenka.
"Tartankan wuxuu i siiyay rabitaan igu ah inaan aqbalo, inaan ku noolaado," ayaa AFP Thayanne Oliveira, oo ah 19, mid ka mid ah 29 tartanka ah, oo ka cabanaya murugada iyo dhibaatooyinka walaaca taniyo ayaa waxaa saameyn ku yeeshay cudurka Hodgkin (qaab ka mid ah kansarka habka lenfiga) ee qaan-gaarka ah.
Haweeneydan madow ee dhalinyarta ah oo leh xayawaanno qurux badan oo dharbaaxo leh ayaa garabsanaya garbaha si ay u iftiimiso dharka madow oo muujiya foomamkeeda deeqsinimo leh.
Qof walba oo tartankiisu dharbaaxo ayuu ku duuban yahay dusha sare ee bawdada wuxuuna qoob-ka-cayaaraa qoob-ka-cayaar, isagoo ku faraxsan dhagaystayaasha dhagaystayaasha ah.
Waxay sidoo kale gashan yihiin dharka midab leh ee dharka lagu gashado ee dhexda.
Dhamaadka bareesada, ninkii dabka ku shaqeeya wuxuu ku qabtaa dab-bakhtiiye, inuu "demiyo dabka".
Ku guuleystaha, blonde oo indhaha buluug ah, ku guuleystay abaalmarinta 3.000 reais (ku saabsan 380 euros) iyo fadhiga sawiro muuqaal leh sawir qaaday caan ah.
Thayanne, oo keliya ayaa abaalmarin ah, Thayanne, waxay ku qanacsan tahay kaalinta saddexaad iyo qiimaha 1.000 réais, laakiin guushii waa meelo kale.
"Hadda, waxaan rabaa in aan ubaxo, nolosheyda gaarka ah, laakiin sidoo kale tusaale ahaan, waa riyadeyda. Marar badan waan maqalay: + Adigu waad qurux badan tahay, laakiin maxaad u badineysaa miisaankaaga? + Way xanuunsantahay, "ayay tiri.
"Waxaa jira taboosyo badan oo ku yaal miyir-beeleedka erotic. Dumarka ku wareegsan ma dareemayaan jawi noocan ah, waxay u malaynayeen in nooca noocaan ah, ay ahayd haweeney oo leh hey'ad maskaxeed, "ayuu yiri Francilene Perez, oo ah qabanqaabiyaha tartanka" Deusa plus-size ".
"Waxaan heystaa calaamad ka mid ah roodhida jinsiga ah waxaanan ka shaqeeyaa qaybinta maqaallo ku yaal dukaamada jinsiga ah, weligayna ma arag dumarka ku wareegsan goobaha qurxinta. Waxaan la hadlayay qabanqaabiyeyaasha Bandhigga Bandhigga "Sexy Fair", waxayna jeclaadeen fikradda, "ayay tiri.
Francilene Perez, fikradku ma aha in uu "raali galiyo buurnaanta", oo ah wadan ay 53% dadka deggan yihiin miisaanka culus, sida lagu sheegay warbixintii Wasaaradda Caafimaadka bishii lasoo dhaafay. "Laakiin haddii haweeney aad u culus tahay, xitaa haddii ay rabto in ay miisaan lumiso, marka la eego, waa inay noqotaa mid jinsi ah oo macquul ah," ayay tiri.
gabadh yar oo 7 ah ayaa ku xadgudbay: "kuwani waa faraha aan isticmaalo", difaacaya macallinka Quraanka
Cudurka Ebola ee DRC: WHO waxa ay ku baaqeysaa in kor loo qaado tallaalka - JeuneAfrique.com